ओलीको राष्ट्रियतामा प्रश्न
दुःखद खबर, चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि ारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षाकर्मीहरुलाइृ थप गर्नुका साथै नेपाली भूमिमा हवाई गसतस् समेत सुरु गरेको छ । अबरअनुसार सउक्त क्षेत्रमा केही दिन यता भारतीय वायुसेनाका वर्मबर्षक विमानहरु दिनहुँ उडान भरिरहेका छन् । अझ खबर अनुसार त गत बिहीवार त नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो । अर्थात भारतले चीनसँगको तनावको निहुँमा नेपालका सीमामा फेरि अतिक्रमण गरेका छ । यस विषयमा नेपालको अधिकारिक निकायले केही बोलेको छैन ।
यसैवीच गत साउन ३१ गते प्रम ओलीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा समकक्षी भारतीय प्रम मोदीलाई शुभकामना दिएपछि आइसब्रेक भनिएको, चिस्सिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई शनै शनै सुधारोन्मुख गराउने तैयारी गरिदैछ भनेर बताइएको छ । यसका लागि दुबै मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालका अधिकारीहरु दुई देशका वीचमा खडा गरिउको बिभिन्न खाले संयन्त्रहरुलाई चलायमान बनाउन जुर्मुराएका छन् । यस अनुसार नेपाल भारतवीच सचिव स्तरीय वार्ता, नेपाल भारत संयुक्त आयोगको वैठकदेखि लिएर बाउन्ड्री ग्रुपसम्मको बेठकका लागि तैयारी गरिदै भन्ने खबर आएको छ । तर उल्लेख्य प्रगति भएको कुनै विवरण सार्वजनिक भएको छैन । जानकारहरु भन्छन्, जबसम्म भारतले नेपालो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कागजी रुपमा मात्रै होइन कि व्यवहारले नै स्वीकार गर्दैन तवसम्म यस्ता वार्ताहरुको फल नेपाल पक्षमा हुन सक्दैन । अझ नेपालभित्र हुने हरेकक्रियाकलापमा जबसम्म भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट स्तरमा चलखेल गर्छ तवसम्म नेपालहरुको सद्भाव भारतले जित्न सक्दैन । यो कुरा भारतले बुझेको छ, तथापि भारत पार्टी नेताहरुलाई लम्पासरवादी बनाएर सकुन्जेल नेपालमाथि दबदबा कायम गरिरहने मूडमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अर्काथरि चिन्तकहरु त आक्रोसित हुँदै हिन्दुस्तानको बिघटन नै यसका सबै छिमेकीहरुको समस्याको समाधान हो भन्छन् । तिनका अनुसार अहिले उपयुक्त समय हो, कमजोर भारतलाई बिभाजन गर्ने । कोरोना महामारीको प्रकोपदेखि जीर्ण आर्थिक अवस्था अनि प्रायः सबै छिमेकहीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेला नै होहान्नुपर्ने । तर अर्काथरि पनि विश्लेषकहरु छन्, जो सुदृढ भारतको उपस्थितिले नै नेपाललाई अर्को विशाल छिमेकीको प्रत्येक्ष हस्तक्षेपबाट जोगाउन मद्दत मिल्छ भनेर दावी गर्छन् । तिनका अनुसार यहाँ दूधले नुहाएका कोही पनि छैनन् । भोलि आकार, बलमा र आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत अर्को विशाल छिमेकीले एकछत्र राज गर्न पायो भने हाम्रो मुलुकको दशा अझ जोखिममा पर्नेछ । त्यसकारण चेक एण्ड व्यालेन्सका लागि पनि दुबै छिमकेी बराबर हुनुपछृ । समदूरीको सिद्धान्त नै नेपालका लागि उपयुक्त छ । यसमा नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन भयो भने दुबैतिरको सुरक्षा र आर्थिक मामिलामा फाइदा लिन नेपालले सक्छ । त्यसकारण एउटा छिमेकीको बिघटन अर्को छिमेकी चैँ शक्तिशाली हुनु नेपालको हितमा किमार्थ हुनेछैन । जेहोस्, तत्कालको कुरा गर्दा नेपालको भूमिमा आकाशमा भारतले बल मिच्याइ गरिरहेको छ । भारत र चीनवीचको समिा तनावमा नेपाल अनाहकमा मुछिने सम्भाबना हलक्क बढेर गएको छ । त्यसमाथि गोरखा सैनिकलाई गलवान तनाव क्षेत्रमा खटाएर भारतले नेपाल–चीनसम्बन्ध धुमिल पार्न पनि खोजेको छ ।
स्पष्ट कुरो के हो भने हामीलाई कसेको झगडामा मुछिनु छैन । अझ बिना कुनै जानकारी, बिना कुनै स्वीकृति नेपालले आफ्नो अर्को छिमेकी मुलुकका विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनेै हुँदैन । यसका लागि काठमाडौंमा गजधम्म बसेको ओली सरकारले पाइला चालिहाल्नु पर्छ । कागजमा मात्र आयो, कालापानी क्षेत्र । व्यवहारमा उक्त क्षेत्रबाट मात्रै होइन कि नेपालको अन्य भूभागहरुमा समेत भारतले जबरजस्ती गरिरहेको छ । नक्शा प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं भनेर कुर्लने प्रधानमन्त्री ओली दिनदहाडै नेपालको सिमानामा घूसपैठ हुँद के हेरेर बसिरहेका छन् ? कि बल्ल बल्ल चाकडी गरेर भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा शुभकामना दिएर मोदीलाई खुशी तुल्याउन पाएको बेला यो प्रकरण उछालेर किन सम्बन्ध बिगार्नु भन्ठानेको हो कि ? हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्री ओली यतिञ्जेल सत्तामा कायम छन्, राष्ट्रियताको सवालले गर्दा मात्र हो । अन्यथा भ्रष्टाचार, कुशासन र असक्षमताका कारण जनताले उहिल्यै सडकबाट ओली र उनको भ्रष्ट टिमलाई मिल्काइसक्थे । हलापानी प्रकरण मात्रै होइन कि ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीमा प्रम ओलीले लिएको अडानका कारणले पनि नेपालीले राष्ट्रियताको सवालमा ओलीसँग अली बढी आशावादी देखिाएका छन् । त, चीन र भारतको वीचमा भइरहेको सीमा तनाव र यसमा भारतले गरिरहेको नेपाली भूमिमा घूसपैठको ओली सरकारले तुरुन्तै प्रतिकार गरुन् ।